(Europe) 14 Jan 2019. Waxaa dib u furmay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda kaa oo tixnaan doona ilaa 31-da bishan.
Bournemouth ayaa dooneysa in weeraryahankeeda reer England Callum Wilson ay 75-milyan oo bound uga iibsatio Chelsea -Waa 25-jibaar lacagihii ay 26-jirka ku soo iibsadeen 2014-kii. (Star)
Wolves ayaa Chelsea kula dagaalami doonta saxiixa Wilson, kaa oo 10-gool dhaliyay ilaa iminka kal ciyaareedkan. (Birmingham Mail)
Chelsea ayaa sidoo kale dooneysa inay dib ula soo saxiixato daafaca dhexe ee Bournemouth Nathan Ake, labo sano uun kaddib markii ay 23-jirka reer Holland ka iibiyeen kooxda lagu naaneyso the Cherries. (Sun)
Garoonka Cusub ee Tottenham ayaa la warinayaa inaan la dhammeystiri doonin xilli ciyaareedkan. (Mail)
Weeraryahanka reer Spain ee Tottenham Fernando Llorente, 33-jir ayaa bartilmaameed u ah Barcelona. (Mundo Deportivo)
Macalinka Manchester City Pep Guardiola ayaa sheegay in kooxdiisa aysan bixin doonin lacagaha 100-ka milyan ee la wariyay in lagu qiimeeyay laacibka reer Portugal ee qadka dhexe kaga ciyaara Wolves Ruben Neves, 21-jir. (Mirror)
Weeraryahanka reer France ee Watford Abdoulaye Doucoure, 26-jir ayaa u sheegay French TV inuu ka tagayo kooxda lagu naaneyso the Hornets. (Canal Football Club)
Xiddiga garabka kaga ciyaara West Ham ee Michail Antonio ayaa sheegay in xiddiga ay isku kooxda yihiin ee weerarka kaga ciyaara Austria Marko Arnautovic, 29-jir uu doonayo inuu u dhaqaaqo Shiinaha. (Sky Sports)
Xiddigii hore ee garabka weerarka Liverpool Ryan Babel 32-jir ayaa qarka u saaran inuu heshiis amaah ah ugu soo biiro Fulham, laacibka reer Netherlands ayaa iminka u ciyaara naadiga Besiktas. (De Telegraaf)
Former Liverpool winger Ryan Babel, 32, is close to moving to Fulham on loan. The Netherlands international currently plays for Besiktas. (De Telegraaf – in Dutch)
Liverpool ayaa baadi goob ugu jirta xiddiga reer Scotland ee garabka kaga ciyaara Celtic James Forrest, 27-jir. (Scottish Sun)
Naadiga Lille ayaa ku soo biirtay tartanka loogu jiro saxiixa xiddiga qadka dhexe West Ham Pedro Obiang, 26-jir. Xiddiga reer Equatorial Guinea ayaa sidoo kale bartilmaameed u ah kooxda Fiorentina. (RMC Sport)
Bournemouth ayaa xiddigeeda qadka dhexe David Brooks, 21-jir u bandhigi doonta heshiis Cusub si ay uga hortagto xiisaha kaga imaanaya Manchester United iyo Tottenham. (Sun)
Manchester United ayaa dooneysa in daafaceeda reer Netherlands Timothy Fosu-Mensah uu amaah ku sii joogo Fulham, balse naadiga lagu naaneyso the Cottagers waxay doonayaa inuu ka tago 21-jirka si ay amaah ugu keensato xiddigo kale oo badan. (Sun)
Weeraryahankii hore ee Manchester United Andy Cole ayaa lagu wadaa inuu Sol Campbell kula biiro Macclesfield Town si uu tababare ugu dhaqdo weeraryahannada kooxda. (Mail)